मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा झर्नासाथ सबैतिर कसरी वितरण गर्ने यस्तो योजना तयार ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा झर्नासाथ सबैतिर कसरी वितरण गर्ने यस्तो योजना तयार !
पानी मर्मतको सिलसिलामा पाइपको पानी बाहिर पठाउनुपर्ने हुँदा त्यसको समेत तयारी गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाक्यले बताउनुभयो । लिमिटेडले नियमित मर्मतसँगै मेलम्चीको पानी आएपछि थप चुहावट हुनसक्ने भनी तयारी अघि बढाएको छ । गत साउनमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सुरुङमा पानी हाल्ने भनेपछि तयारी अघि बढाइएको थियो । अहिले पनि पुरानो पाइपमा चुहावट खाज्दै भेटिएका स्थानमा टालिएको लिमिटेडले जनाएको छ ।
ड्यूटीमै रहेका प्रहरी हवल्दारकाे दुःखद निधन
निर्मला हत्या प्रकरणःभर्खरै आयो चकित बनाउने खबर, बम दिदीबहिनीले हाले ३ जना विरुद्ध मुद्दा – पुरा हेर्नुहोस